Fijoroan’ny Antenimierandoholona : tsy azo antoka ny fahamarinan-toerana politika | NewsMada
Fijoroan’ny Antenimierandoholona : tsy azo antoka ny fahamarinan-toerana politika
Hatramin’izao, mbola eo am-pitadiavana na fanamafisana fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny mpitondra. Anisan’ny antony nihazakazahana tamin’ny fifidianana senatorialy hijoroan’ny Antenimierandoholona izay. Antony tsy azo anoarana azy ny namitana ny fifidianana ao anatin’ny fahavaratra.
Ambaran’ny mpahay lalàna sasany fa antoky ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny fijoroan’ny Antenimierandoholona. Tsy afa-mitory na manala ny filohan’ny Repoblika amin’ny toerany io andrimpanjakana io, tsy afa-manao fitsipaham-pitokisana ny governemanta ihany koa.
Niseho tamin’ny taon-dasa izay fiampangana ny filohan’ny Repoblika amin’ny toerany sy ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta izay, hany ka ahina mbola hiverina. Anton’izany ny tsy fahazoana antoka ny tsy fahamarinan-toerana politika tanteraka sy maharitra?
Tsy mazava ny fifandanjan-kery eny amin’ny Antenimierampirenena
Azo antoka hahamarin-toerana ve ny fijoroan’ny Antenimierandoholona, fa hoe tsy afa-miampanga ny filohan’ny Repoblika sy manao fitsipaham-pitokisana ny governemanta?
Mampiavaka izao fitondrana izao ny tsy fananan’ny filohan’ny Repoblika depiote na iray aza eo anivon’ny Antenimierampirenena.
Anisan’ny nahatonga ny fiampangan’ny depiote 121 amin’ny 151 ny filohan’ny Repoblika sy ny fitsipaham-pitokisan’ny depiote 95 amin’ny 151 ny governemanta izay tsy fahamarinan-toerana izay noho ny tsy fananan’ny mpanatanteraka depiote.
Hatramin’izao, tsy miova firy na tsy mazava na tsy mety ho marin-toerana tanteraka ny fifandanjan-kery politika eny anivon’ny Antenimierampirenena. Mbola ahina hiverina ny fiampangana ny filohan’ny Repoblika sy ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta amin’izany? Eny, na eo aza ny hoe “mémorandum”.
Hitondra inona eo amin’izay fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny fijoroan’ny Antenimierandoholona? Na tombanana tsy hanahirana firy intsony toy ny teo aloha aza ny fandinihana sy fanandaniana volavolan-dalàna, na maro anisa amin’izany andrimpanjakana izany koa aza ny antokon’ny fitondrana…
Une réponse à "Fijoroan’ny Antenimierandoholona : tsy azo antoka ny fahamarinan-toerana politika"
RAKOTOZAFY Jean 06/01/2016 à 01:05
Tsotra de tsotra ny tian’ny mpitondra hatao. Mavesatra hoa azy raha ohatra ka niongana teo izy sy ny gouvernemanta raha toa ka tsy mbola nisy ny loholona. Satria ny Filohan’io andrim-panjakana io dia efa hita fa ho azon’ny olon’ny HVM ihany ary araka ny constitution dia izy io no mitondra an’i gasikara raha sendra ka miala na miongana ny filoha malemy sy ratsy fototra amin’izao. Kajikajy politika daholo io satria sarotra amin’ny filoha ankehitriny ny hampandroso an’i Mada satria tsapan’ny rehetra eny fa hatramin’ny zaza vao mandady fa tsy io ilay olona tadiavin’ny malagasy.